ARTS Archives - Techip RELAY
MUTSVENE HURUMBA MAZANO mwe sinema Deals ENTERTAINMENT upfumi
Tsvaga imwe nzira, yekuita mutserendende kurwisa coronavirus
Iye anorwadziwa Alioum Moussa anga afunga kumuisa bhurashi uye nenzira yake akaunza masendi maviri kurwisa coronavirus. Yakafuridzirwa kwazvo, yakazvipira kunharaunda nemagariro zvinokonzeresa, Alioum Moussa akagadzira…
Mazita enzvimbo uye zvivakwa muCameroon: Vertigo yekoloni
Chinde Juil 6, 2020 0
Mumaguta, pane dzimwe nguva kusagadzikana kusingatarisirwi kwekoloni yakapfuura mumazita enzvimbo uye zvivakwa. Yaoundé inofanirwa kunge iri yega guta pasirese iro nzvimbo dzinemaviri dhinominesheni: chekutanga, icho, chakakurumbira, icho isu…
Dambudziko rebhuruu uye dema kutsamwa: apo zviratidzo zve colonization flicker
Chinde Juil 5, 2020 0
Sunungurai zvimwari, recha zvakare migwagwa: yasvika nguva yekubvisa nzvimbo yeruzhinji yehuwandu hwekusarura uye kudzvinyirira? Iyo nharo iri kupisa, uye ndeyepasirese. Ndiani ane basa rekutaura nyaya, uye ...
Mifananidzo yeAfrican inotukirira zita re Unesco
Chinde June 28, 2020 0
Vaviri makumi maviri vakawirwa pasi pakati pemazana mashoma uye mazana mazana masere emadhora nekufunga kutenga mabasa eAfrica ane huchokwadi kana kutumira kunze kwainyengedzwa ne "Unesco" nehumwe. Tarisana nekuwedzera kwe…
Tourism: Campaign yekumutsiridza mudunhu renhamo
Kutsigira vatambi vekushanya, vakaneta kubva pakatanga dambudziko rehutano, Dunhu rakavhurwa, Muvhuro, June 15, 2020, nhandare yavo yekukurukurirana kukurudzira nharaunda yavo. Iwe unofanirwa kuchengetedza…